Grabr - Global Shopping 3.50.9-hotfix.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.50.9-hotfix.0 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ေစ်း၀ယ္ျခင္း Grabr - Global Shopping
Grabr - Global Shopping ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Grabr သူတို့လမ်းကြောင်း en ထိုထုတ်ကုန်ကယ်မနှုတ်နိုင်သူကိုခရီးသွားများအတွက်အတူဒေသအလိုက်မဝယ်နိုင်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနေစျေးဝယ်ချိတ်ဆက်နေတဲ့ peer-to-peer စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်အဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးအမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်စျေးဝယ်။ သင့်ရဲ့မေတ္တာရပ်ခံကို item တစ်ခုအမိန့် Create, သင်၏မြို့ကိုဦးတည်ခရီးသွားများအတွက်လမ်းကြောင်း en အပ်ရန်လေလံဆွဲပါလိမ့်မယ်။ လွယ်ကူခြင်းအဘို့, Grabr ပစ္စည်းရဲ့အခွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံနှင့်အကောင်းဆုံးခရီးသွားအခကြေးငွေ-The သင်သည်သင်၏တဲ့ item ပို့ဆောင်များအတွက်ခရီးသွားပေးဆောင်ပိုက်ဆံပမာဏ Auto-တွက်ချက်။ ခရီးသွားများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤပစ္စည်းများကို-အဝတ်အစား, အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ, gadgets, စုဆောင်းခြင်း, အိမ်မှာကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပိုပြီး-မှာ Amazon နဲ့ eBay ကိုလိုအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များကိုဝယ်ကြလော့။
ဥရောပတစ်လွှားနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသင်အကြိုက်ဆုံးမြို့ကြီးများသို့သွားရောက်, သင်သွားရအဖြစ်ငွေရှာ။ စျေးဝယ် Amazon နဲ့ eBay ကိုလိုအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များမှာကိုရောင်းပစ္စည်းများတောင်းဆိုရန်နှင့်ခရီးသွားများအတွက်မကြာခဏဆုလာဘ်အတွက်ကို item စုစုပေါင်းရဲ့စျေးနှုန်း၏ 15-20% ဝင်ငွေ, သူတို့ရဲ့နောက်တစ်နေ့ခရီးစဉ်အပေါ်သူတို့ကိုကယ်မနှုတ်ရန်လေလံဆွဲ။ သင်အလိုရှိကိုမဆိုပစ္စည်းများပေါ်တွင်သင်၏ဦးတည်ရာနှင့်လေလံပေါ် အခြေခံ. filter အမိန့်။ In-လူတစ်ဦးသည်သင်၏စျေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်, သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့် paid ရ။ Grabr ဈေးပေါပေါသွားလာလမ်းတစ်ဖို့သွားလာရင်း-နှင့်အချို့ကိစ္စအခမဲ့ပါ!
•သင်မကြာမီလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်မြို့မြို့တို့မှ Browse ကိုအမိန့်
•ပေးပို့သင်လမ်းကြောင်း en ကယ်မနှုတ်နိုင်ပစ္စည်းများအပေါ်ကမ်းလှမ်း Make
• In-app ကို messenger ကိုအတွင်းအပြင်စျေးဝယ်အတူ Chat
•ကြှနျုပျတို့ app ကိုအတွင်းအပြင်လုံလုံခြုံခြုံ paid Get
•သင် Amazon, eBay နှင့်အခြားအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များအပေါ်ဝယ်ယူခြင်းကို-ချင်ပစ္စည်းများကိုအဘို့အလို့ငှာတောင်းဆိုမှုများကို Create
•ကြှနျုပျတို့ In-app ကို messenger ကိုအတွင်းအပြင်ခရီးသွားများအတွက်နှင့်အတူ Chat
•ပုံမှန်ပေးပို့ updates များကို-i.e ရယူရန်။ ကို item ဝယ်ယူခဲ့သည်ကို item ရောက်လာပြီးကို item လမ်းကြောင်း en ဖြစ်ပါသည်
• app ကိုအတွင်းအပြင်လုံလုံခြုံခြုံ Pay - သင်သည်သင်၏တဲ့ item ၏ပေးပို့အတည်ပြုတစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသာတရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်
Grabr - Global Shopping အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Grabr - Global Shopping အား အခ်က္ျပပါ
natanaelbr စတိုး 4.09k 878.99k
Grabr - Global Shopping ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
Delivery Club: Еда–Бургер Кинг, kfc.Доставка пиццы
APK အေၾကာင္း Grabr - Global Shopping အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.50.9-hotfix.0
ထုတ်လုပ်သူ Grabr Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://grabr.io/privacy
လက်မှတ် SHA1: 07:85:65:3B:F7:94:9C:01:76:17:5E:81:F9:49:9E:FD:33:0D:EB:9D
Grabr - Global Shopping APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ